Sachigaro weAfrican Tourism Board Anochemera Kubatanidzwa kweAfrica Zvino
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » Sachigaro weAfrican Tourism Board Anochemera Kubatanidzwa kweAfrica Zvino
African Tourism Bhodhi • Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • misangano • nhau • Zimbabwe Breaking News • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
African Tourism Board pachiitiko chakakosha
Pakuvhura mashoko paIntra-African Trade Fair 2021 iri kuitwa kubva muna Mbudzi 15-21, 2021, muDurban, South Africa, pakaitwa kuchemera kubatanidzwa kuitira kuti chikamu chehupfumi cheTourism chishande zviri nani. Izvi zvinotsigirwa zvizere nasachigaro weAfrican Tourism Board (ATB) VaCuthbert Ncube.
Kushevedzera kwakaitwa kwaive kwekuti vese vane chekuita navo vauye pamwe chete se block yakabatana.
Zvakanzi yave nguva yekuti titange kuongorora mafambiro nemaitiro ezvipingamupinyi zvazvino zvedenda uye kugadzira mhando dzekupora.
Mamodheru anogona kuzodudzirwa kugadzira izvo zvinofanirwa kuumba mbiru dzekudzikisa hupfumi hweCOVID-19.
The African Tourism Bhodhi (ATB), yakavambwa muna 2018, isangano rinozivikanwa pasi rose nekuita sechikonzero chekusimudzira kwekufamba nekushanya kuenda, kubva, uye mukati medunhu reAfrica. Yagara iri mutsigiri wekuratidzira Africa senzvimbo imwe yakabatana yekushanya.
Kukanganisa kwedenda kuchaita muna 2023 uye pamwe kusvika muna 2025, asi nhau dzakanaka ndedzemakondinendi mazhinji anga achitsvaga nzira dzekugadzirisa uye vakagadzira zvirongwa zvekudzoreredza kutonga kuvhurwazve kweindasitiri yeVashanyi.
Panofanirwa kuve nekurudziro dzakasimba dzekuti hurumende dzibvumirane pamaitiro ekuti izvi zviitike kuitira kumutsiridza indasitiri yeKufamba neKushanya iyo parizvino iri pasi pekumanikidzwa kukuru. Pane chido chechimbichimbi chekushanda pamwe chete nenzira dzedu dzakasiyana, tichiedza kugadzirisa zvipingamupinyi zvekutengeserana nekufamba sezvazvinonzi, "Africa yakavhurika bhizinesi." Kubva pari zvino, zvichiri kunetsa kufamba kubva kune imwe nhengo kuenda kune imwe.
Nyaya dzakakosha dzinofanirwa kugadziriswa Africa isati yanakidzwa nekuedza kwekutengeserana kweIntra-Africa. Chikamu cheTourism pamwe ndicho chikamu chine mukana mukuru wekukura mukondinendi uye chinogona kuwedzerwa zvine mwero kugadzirisa chinodikanwa ichi. Nekudyidzana kunoshanda uye nekufunga munzvimbo dzese dzedunhu, Africa inogona kunyatso kuzviratidza paChiitiko cheKufamba uye Kushanya seimwe.
Africa yaifanira kupira mabhenefiti akakura emagariro nehupfumi nemikana yekukura iyo Tourism ingangokwanisa kuripa nekuunza kondinendi yese. Mafungiro akamanikana uye kuchengetedza chimedu chenyika yeAfrica pie nenyika inzira yekuona pfupi inopotsa mufananidzo mukuru. Kune akati wandei mikana inogona kushandiswa nekutora nzira yakanyatso kurongeka sezvo kugadziridzwa kwezvibvumirano zvepasirese kunokurudzirwa kuti ive nechokwadi chekuti nyika dzinoshanda pamwe chete pazviitiko zvebhizinesi uye chikamu cheTourism pamwe nekukura nekuwedzera sezvinangwa.
VaNkosazana Zuma, vaimbova Sachigaro weAfrican Union (AU) uye vaimbova gurukota reChad
Vaimbove Sachigaro weAU vakasimbisa nyaya yekuti kondinendi itange kutenda zvirongwa zvinokurudzirwa pamwe nezviri kuitwa neAU. Kunyanya, Nyika dzeNhengo dzinofanirwa kutanga kudhinda AU Passport iyo yakatumirwa kuti ibudiswe munyika imwe neimwe. Kushaikwa kwechido kubva kunyika kuti vatore chikamu kuri kukanganisa kufambira mberi uye kuita pasipoti iyi inogona kuvhura musuwo weTourism kuwanda.
Musangano weIntra-African Trade Fair wapindwa naVanoremekedzwa Gurukota uye vaimbova sachigaro weAU, Nkosazana Zuma pamwe nevakuru vakuru vebhodhi reTourism kubva muAfrica nevamwe vanoremekedzwa.
Iyo African Tourism Board (ATB) chikamu che International Mubatanidzwa weVashanyi Partner (ICTP). Sangano rinopa kurudziro yakabatana, tsvakiridzo ine hungwaru, uye zviitiko zvitsva kunhengo dzayo. Mukubatana nenhengo dzakazvimiririra uye dzeveruzhinji, iyo African Tourism Board inosimudzira kukura kwakasimba, kukosha, uye mhando yekufamba uye kushanya muAfrica. Sangano rinopa hutungamiri uye mazano pamunhu uye pamwe chete kumasangano ayo ari nhengo. Iyo ATB iri kuwedzera pamikana yekushambadzira, hukama neveruzhinji, mari, kushambadzira, kusimudzira, uye kumisikidza niche misika. Kuti uwane rumwe ruzivo, tinya pano.